मेरो आमा पछिको सब थोक तिमी नै थियौ , हामी सबैलाई एक्लै बनाएर कसरी जान सकेउ तिमी ! – Krazy NepaL
May 7, 2021 794
मैले सम्बोधन पनि यसरी गर्थेकि ” तिमी भनेर “;तिमीलाई मात्र ठूलो मुटुले.. तिमी भन्न सहज हुन्थ्यो । तिमी बाहेक अरू आमाहरूलाई कहिले तिमी भन्ने आट आएन।। दैब पनि कति निष्टुरी।।आज एक्लै पारेर किन कहा बिलिन भयौ देवी।। मेरो माॅ पछिको माइली तिमी तर आज मेरो मम्मी पनि टुहुरो बनाएर गयौ।।
मेरो मम्मी को पनि आमा तिमी नै थियौ,, सबैको आमा थियौ।। हात खुट्टा भाँ’चिए’को अधुरो अपाङ्ग जस्तै बनाएर छाडेर गयौ। तिम्रो भौतिक शरीर खोज्न म कॅ जाऊ, कहा भौतारिम ?? भनन… तिम्रो त्यो हसिलो रूप्से अनुहार हेर्न तिमीलाई सुमसुमाउन छुन कहा आउने होला देबी तिम्रो त्यो तील कोठी अनि धप्प उज्यालो वर्ण अब म अरू कसमा देखु।। तिम्रो घरको आँगनमा ;माइली मामु भन्दै छिर्थे।।
गाह्रो छ अब तिमी बिना पहिला जस्तो जिन्दगी गुजार्न तिम्रो कमीले।। म कसरी जाने होला त्यो घर जहाँ तिमी नै छैनौ त्यहाँ अब अस्तित्व नै छैन त्यहा।। तिमी म सँगै हिँडिको त्यो अनामनगर,त्यो थापागाउँ को गल्ली गल्ली संखमुलको उकालो ओरालो जहाँ जादानि संगै लाग्थियौ।।अब त्यहाँ गाइयो भने कसरी पार गर्ने होला त्यो बाटो जहाँ जहाँ तिम्रो पहिला थियो।।।
Nextएउटा इमान्दार केटा चाहियो, म संगै जापान जाने अनि संगै बस्ने काम गर्ने ! सम्पर्क गर्नुहोला।